Shona to English Meaning of yourself - shona.english-dictionary.help
English to Shona Meaning :: yourself
Yourself - pachako Yourself :: pachako
You got YOURSELF a sleepover.
English to Shona Dictionary: yourself
Meaning and definitions of yourself, translation in Shona language for yourself with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of yourself in Shona and in English language.
What yourself means in Shona, yourself meaning in Shona, yourself definition, examples and pronunciation of yourself in Shona language.
Blossom (ruva) :: Below my window theres an apple tree in blossom Sunless (sunless) :: This is a more upbeat way of looking at the regions temperature which can fall to 51 Celsius in a sixmonth sunless winter Battery (bhatiri) :: Today you would need a battery of electronic equipment to measure the difference in noise and vibration between say a Focus and a Mondeo Sunlight (chiedza chezuva) :: Weeds reduce yields by competing with crops for water nutrients and sunlight